बन्दै गरेको वाम सरकार र त्रसित सेयर बजार « Janata Samachar
बन्दै गरेको वाम सरकार र त्रसित सेयर बजार
प्रकाशित मिति : 24 December, 2017 3:10 am
देश अहिले चुनाव सम्पन्न गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छ, धेरै सेयर लगानीकर्ताहरु को चासो वाम सरकार बनेपछि सेयर बजार कता जान्छ ? वाम सरकार बनेपछि नेपाली सेयर बजार को भविष्य के हुन्छ ? भन्ने तर्फ छ ।
वाम सरकार बनेपछि सेयर बजारले एउटा गति लिनेछ । वाम सरकारले सेयर बजारलाई सकारात्मक असर पार्ने छ । किन गति लिन्छ भन्दा अब बन्ने सरकार नौ महिनामा परिवर्तन हुने सरकार होइन, स्थिर सरकार हो, स्थिर सरकार बनेपछि पक्कै पनि देशमा आर्थिक विकास हुन्छ, आर्थिक विकास र सेयर बजार एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् ।
जति-जति देशमा आर्थिक विकास हुँदै जान्छ, त्यति नै सेयर बजारमा त्यसको सकारात्मक असर पर्दै जान्छ । अब हुनेवाला प्रधानमन्त्री केपी आलीले बारम्बार विभिन्न कार्यक्रम र विभिन्न सेयर बजारसँग सम्बन्धी निकायहरुलाई भन्ने गर्नु भएको छ, ‘म्रो सरकार बनेपछि सेयर बजार उकालो लाग्छ, तपाईहरु निर्धक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।’
त्यसकारण तपाईहरु के कुरामा ढुक्क हुनुहोस् भने वाम सरकार बनेपछि सेयर बजारमा सकारात्मक असर पर्छ । वाम सरकारले सेयर बजारलाई अनुकूल हुने नीति र कार्यक्रम ल्याउने छ । पाँच वर्षमा देशको आर्थिक विकास कसरी गर्ने भनेर डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा आर्थिक खाका कोर्ने एउटा टिम बनाई सकेको छ । भारत र चीनले नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न हामी आतुर छौ भनिसकेका छ्न् । त्यस कारण वाम सरकारसँग लगानी कर्ता तर्सनु पर्ने कुनै कारण छैन ।
अब बन्ने सरकार नौ महिनामा परिवर्तन हुने सरकार होइन, स्थिर सरकार हो, स्थिर सरकार बनेपछि पक्कै पनि देशमा आर्थिक विकास हुन्छ, आर्थिक विकास र सेयर बजार एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्
चुनावपछी बजार बढछ भन्ने आसाम धेरै लगानीकर्ता बसेका थिए तर चुनावपछि बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा लगानीकर्तामा निराशा छाएको छ । अहिले बजार घटने प्रमुख तीन कारण छ्न् । पहिलो बैंकहरुले बचतको ब्याजदरमा गरेको वृद्वि, दोस्रो भ्याट प्रकरण र तेस्रो नयाँ सरकार निर्माणमा भएको ढिलाइ हो । यी तीन वटै कारण अल्पकालीन हुन तरलताको समस्या चुनावमा बैंकहरुबाट बाहिरको करिब २० अर्ब रुपैयाँ छिटै बैङ्किङ च्यानलमा आउनेछ ।
त्यसपछि तरलता समस्या समाधान हुनेछ । भ्याटको समस्या हामी समाधान गर्छौ भनेर ओली ज्युले भनी सक्नु भएको छ । नयाँ सरकार माघ को मध्यतिर बन्नेछ । सरकार निर्माणपछि सरकारका नीति र कार्यक्रम आउने छ । आर्थिक नीति आउने छ, जुन आर्थिक नीति सेयर बजार अनुकूल आउने छ । त्यस कारण वाम सरकारसँग लगानी कर्ता तर्सनु पर्ने कुनै कारण छैन ।
अहिले बजार घटने प्रमुख तीन कारण छ्न् । पहिलो बैंकहरुले बचतको ब्याजदरमा गरेको वृद्वि, दोस्रो भ्याट प्रकरण र तेस्रो नयाँ सरकार निर्माणमा भएको ढिलाइ हो
यता गैर आवसिय नेपाली सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष र पूर्व, अध्यक्षले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवत बहादुर कार्कीलाई भेटेर गैर आवसिय नेपालीलाई नेपाली सेयर बजारमा संस्थागत लगानी गर्ने वातावरणका लागी नीति नियम छिटो ल्याउन पर्‍यो भन्ने कुरा आएको छ । यो बजारलाई सकारात्मक बनाउने एउटा राम्रो मसला हो ।
नयाँ सरकार को निर्माणपछि अनलाइन ट्रेडिङको काम छिटो छिरितो हुनेछ । ब्रोकर कम्पनीहरूलाई मार्जिन ल्यन्डिङ र डिलरसिपको सुविधा दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने कुरा चलिरहेको छ । यो तुरुन्तै गर्नु पर्छ भन्ने आम लगानीकर्ताको माग छ । यो मागलाई नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री ले सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
बजार निर्माता ल्याउने कुरा चलिरहेको छ । याे बजारका लागी सकारात्मक कुरा हो । सेयर बजारको ज्ञान दिन विभिन्न स्थानमा धितोपत्र बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्छ । विद्यालय तहदेखि सेयर र सेयर बजारको ज्ञान दिने विषय वस्तु पाठ्य सामग्रीमा समटने कुरा चलेको छ यो पनि सकारात्मक कुरा हो ।
अब केन्दीय सरकार निर्माणसँगै प्रदेश सरकार बन्ने छ । देश अब आधिकारिक रूपमा सङ्घीयतामा जाँदैछ । अब देश राजनीतिकक्रान्ति पुरा गरी आर्थिक क्रान्ति तर्फ लम्कने अवस्थामा पुग्दैछ । नयाँ सरकारको निर्माणपछि देशमा विकासका मुहान फुटने छन् । पुँजी बजारलाई नकारात्मक असर गर्ने कुनै नकारात्मक नीति र नियम आउने छैन । बरु देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास वहार पक्कै आउने छ ।
हाम्रो सेयर बजारमा वित्तीय कम्पनीको बाहुल्यता छ । अब बैंकहरुले आठ अर्ब पुँजी पुर्याइसकेपछि हकप्रद सेयरको बाढी आउने छैन फलस्वरूप अहिले देखिएको अत्यधिक आपूर्ति समस्या समाधान हुनेछ । गैर आवसिय नेपालीहरूको नेपाली पुँजी बजारमा प्रवेशसँगै अत्यधिक सेयर आपूर्ति को समस्या समाधान हुने छ । अब कम्पनीहरूको बाँकी तीन वटा त्रैमासिक रिपोर्ट राम्रो आउने छ ।
अब देशमा स्थिर सरकार बन्दैछ जुन सरकारले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने छ । नौ-नौ महिनामा सरकार बनाउने र गिराउने प्रथाको अन्ते हुनेछ देशमा आर्थिक विकासका मूल फुटनेछन् । अहिलेसम्मका चुनावी वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ । आर्थिकवृद्धि र सेयर बजार एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन् । आर्थिक वृद्धिदर बढ्रदा त्यसको सकारात्मक असर सेयर बजारमा देखिन्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सातै प्रदेशमा विकासको प्रतिस्पर्धा चल्नेछ । सबै स्थानीय निकायमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पुग्ने छ्न् । त्यहाँ रहेको स–सानो पुँजी परिचालन गर्न वित्तीय कम्पनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छन् । तीव्र गतिमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । फलस्वरूप देश औद्योगिक तथा कृषि क्रान्ति तर्फ जानेछ ।
वैदेशिक लगानीको ओइरो लाग्ने छ । लाखौँ पर्यटक बर्षै पिच्छे नेपाल भित्रने छ्न् । पर्यटन व्यावसायले एउटा फडको मार्नेछ । रियल सेक्टरका कम्पनीहरू फस्टाउने छन् जुन कम्पनी नेप्सेमा सुचिकृत हुनेछ्न । रियल सेक्टरका कम्पनीहरू ले आइपीओ निकाल्ने कुरा आइरहेको छ । शिवम सिमेन्ट र डिस होमले अब छिटै आइपीओ जारी गर्दैछ्न । यो भनेको सेयर बजारको लागी सकारात्मक कुरा हो । अब हाम्रो बजारमा पनि लगानीका विविध क्षेत्र हुने छ्न ।
नौ-नौ महिनामा सरकार बनाउने र गिराउने प्रथाको अन्ते हुनेछ देशमा आर्थिक विकासका मूल फुटनेछन् । अहिलेसम्मका चुनावी वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढेको छ । आर्थिकवृद्धि र सेयर बजार एउटा सिक्काका दुई पाटा हुन्
यो वर्ष नेपाल को आर्थिक वृद्धिदर लगभग ६–७ प्रतिशत हुनेछ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यो स्वभाविक रूपमा चुनावी वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढने छ । एकातिर यो वर्ष राजनीतिक स्थायित्व हुने र सबै आर्थिक सुचक सकारात्मक रहेको छ । अर्को तिर वर्तमान नेप्सेले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेर अर्को निजी नेप्से ल्याउने चर्चा छ । अर्को नेप्से आउँदा स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धा बढेर बजारमा अझ सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागी एनसेल पछि नेपाल टेलिकममा आएको सुधारलाई लिन सकिन्छ ।
यी विविध कारणले गर्दा नेपाली सेयर बजारको भविष्य ज्यादै सुनौलो छ । त्यस कारण अहिले लगानीकर्ताहरु अन्योलमा पर्नु पर्ने कुनै कारण छैन । अहिले सेयर बेचेर बजारबाट बाहिरीने समय हुँदै होइन अहिले ज्यादै सस्तो मूल्यमा राम्रा राम्रा कम्पनीको सेयर किन्ने अवसर छ । यो समयमा तपाईहरुले राम्रा कम्पनीका सेयर खरिद गरी राम्रो पोर्टफोलियो बनाउने ज्यादै उपयुक्त अवसर छ । तर घटदो बजारमा आफू सँग भएको सबै पैसा लगानी नगरी घट्दो बजारबाट फाइदा लिन भने नचुक्नु होला ।
(लेखक सेयर बजार का जानकार हुन्)